BangBang Rabbit dia lalao ady mavitrika | Androidsis
BangBang Rabbit no mahatonga anao ho bitro matanjaka indrindra a la Archero
BangBang Rabbit dia lalao vaovao ho an'ny Android izay hidirantsika ao amin'ny hoditry ny tena kinga amin'ny fikirakira sabatra. Lo Archero ao anatin'ny foto-kevitra, lalao miady izay zara raha ananantsika segondra fitsaharana.
Raha miteny momba an'i Archero isika, izany lalao hetsika lehibe izany izay nanjary iray amin'ireo tsara indrindra nilalao tamin'ny finday, dia ho an'ny zava-misy fotsiny fa isaky ny mahavita dingana iray isika dia afaka misafidy fahaiza-manao na tanjaka telo samy hafa; EFA ho hery vampirika hamerina HP isaky ny tsindry na mamorona karaoty goavambe fotsiny izay hanampy antsika amin'ny adinay. Ataovy.
1 Ity farany ity lalao ity
2 BangBang Rabbit mbola ao anaty beta
3 Safidio am-pahendrena ny statistika sy ny fanamafisana
Ity farany ity lalao ity
Ianao dia mahay manao sabatra bitro mahay ary miaraka amin'ny bokotra tsotra roa sy ny fahatelo dia ho afaka hihazona ireo fahavalo rehetra hanatona anao ianao. Bokotra iray hanafika ny havanana ary ny iray ho amin'ny ankavia, miampy ny iray manokana izay miteraka fiatraikany lehibe amin'ny fahavalo izay ananantsika eo akaiky.
Noho izany manaova sary iray miasa tsara amin'ny sary ary izany dia manasa antsika handalo ny ambaratonga rehetra amin'ny fihodinana rehetra. Ny fihodinana tsirairay dia mamela antsika hanatsara ny sasany amin'ireo fahaiza-manao na antontan'isan'ilay mahery fo, noho izany dia mila misafidy tsara izay haleha isika.
Azontsika ampiasaina ny hery vampirika ary ahafahantsika mahazo teboka fiainana isaky ny tratra dia nahazo na nampitombo ny fahasimbana rehefa nilatsaka mihoatra ny 50% ny tobim-pahasalamantsika. Fahafahana samihafa izay ampiana amin'ny fanatsarana ny fitaovam-piadiana azontsika raisina rehefa mandroso amin'ity lalao ady mahafinaritra sy mavitrika ity isika.
BangBang Rabbit mbola ao anaty beta
BangBang Rabbit dia niditra an-tsokosoko tao amin'ny Play Store hatramin'ny naha-beta azy milaza fa mbola misy fanavaozana manatsara ny lalao, ny atiny ary zavatra maro hafa ka tonga lafatra mba hankafizana ny dikanteny farany.
Azontsika atao mihitsy aza mandray fitaovam-piadiana bebe kokoa hanapa-kevitra izay tianao mandalo ireo ambaratonga rehetra ireo ary afaka mankafy ny tontolo iainana isika. Marina fa ny gameplay tsy manome ho an'ny Archero, satria eto isika dia voafetra ihany ny fahafahantsika mihetsika aoriana.
anefa eny mahazo fihenjanana be ianao amin'ireo fahavalo marobe izay mihazakazaka eo an-tongotsika mba hiezaka hanafoana antsika. Fotoana iray tsy dia mahaliana fotsiny ary izay hanjakan'ny fitaovam-piadiana marobe hifidianantsika sy hampiasana ireo paikady ireo mba hanampiana ny ekipa afaka mamorona fahavoazana be dia be amin'ny fahavalo.
Safidio am-pahendrena ny statistika sy ny fanamafisana
toy izany mijanona miaraka amin'io ady io izahay amin'ny tetika kely kokoa raha mandeha andian-dahatsoratra isika ary te-hanao fitambarana eo amin'ny fitaovam-piadiana izay hatsarantsika sy ireo fanamafisana ny statistika sasany; Manonona manokana ny karaoty lehibe satria ho hitanao ny toy izany (heverinay fa naka fakana iray ho anao izahay hijerena).
Amin'ny lalao dia lalao mahafinaritra be io ary ny tontolo iainana ary koa ny fijerin'ny maso ny fanafihana bitro mpiaro antsika dia mihoatra lavitra noho ny azo. Misy ambaratonga isan-karazany, noho izany dia toa hanana hanana ampy isika hankafy traikefa mahaliana natolotry ity studio lalao video antsoina hoe X-land ity.
BangBang Rabbit anananao maimaim-poana ao amin'ny Play Store miaraka amin'ny bitro mitam-piadiana tsara ary ianao miaraka amin'ny fanirianao hankafy mba tsy hijanonan'ny fikapohana. Mitaky fotoana ny fanandramana azy amin'ny beta.
Fonosina hetsika ho an'ny ady an-tsokosoko izay tsy maintsy safidinao ny fivoaran'ny statistika.
Ny vokany maso rehefa manafika fahavalo isika
Tsy amin'ny Espaniôla
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » BangBang Rabbit no mahatonga anao ho bitro matanjaka indrindra a la Archero
Tonga ny oppo A53 miaraka amin'ny efijery Snapdragon 460 sy 90 Hz: endri-javatra, vidiny ary misy an'ity finday vaovao ity